Gossip, Rumor | The Mandalay Gazette-Myanmar/Burma News Media Forum Network
Gossip, Rumor	5
Comments By Postအဖေ့ နှစ်ပတ်လည်နေ့ဟာ ဘယ်နေ့လည်းဗျာ - Ko chogyi - အလင်း ဆက်မိုးရာသီနှင့်ကလေးများကျန်းမာရေး - Ma Ma - သခင် mobileချစ်သော မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာ ဘယ်လဲ ? - Ma Ma - nay khinဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ - kai - TNAအာစရိယ ငါးခုံးမ - kai - အလင်း ဆက်အမျိုးစောင့် ဥပဒေ ဆိုတာ ကို ဒီ လို ထပ် ဖြည့်ကြည့် ရင် မကောင်း ဘူး လား။ - kai - အလင်း ဆက် ဘ၀ဆိုတာ ၃/ ၂၀၀၈ - ကြက်အူလှည့် - ဦး ကြိမ်ပျောက်ဆုံးနေသော နောက်ဆုံးခြေရာ - padauk moe - အလင်း ဆက်``ပိုစ့်အိမ်တွေမှာ ခရမ်းရောင်မီးလေးတွေ စီကာရီကာထွန်းထားတဲ့ရွာဟာ´´ - အလင်း ဆက် - အာဂကျနော်သိတဲ့ ကျားမေမေ - အလင်း ဆက် - ကြက်အူလှည့်လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် နှင်းသီးပွင့်ဖတ် - အလင်း ဆက် - Ma Eiလေထဲတွင်လွင့်ပျံ့ခဲ့သော လွင့်ပျံ့နေဆဲဖြစ်သော - အလင်း ဆက် - KZမီးလောင်ဒဏ်ကြောင့် ဝေဒနာပြင်းထန်စွာ ခံစားနေရရှာသော အသက်၉၆နှစ်အရွယ်အဖွားအို တစ်ယောက် - ဦး ကြိမ် - အလင်း ဆက်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၏ အထ္ထုပ္ပတ္တိ အကျဉ်း နှင့် ရရှိခဲ့သော ဆုများ - အလင်း ဆက် - Wowဓာတ်ပုံဆရာတွေကို မချစ်သင့်တဲ့ အကြောင်းအရင်း ၄၁ ချက် - အလင်း ဆက် - ဂန္ဓာရီ ဆြာအုပ်သာယာတင့်တယ် - အလင်း ဆက် - Shwe Ei``လမ်းဘေး Talk ´´ - အလင်း ဆက် - TNAMPU ---- EASi - TNA - မင်းမင်းကဗျာချစ်သူ များ ၏ ကဗျာပြခန်း အမှတ် (၃) - သခင် mobile - KZ၂၀၁၅ခုနှစ် ဘာမားစပရင်း ဒိုင်းလုပွဲဖိုင်နယ် - Wow - ကြက်အူလှည့်ကန္နားစီးမိဂီသို့ ... ငါးစိမ်းသည် ဗားရှင်း - ကိုရင်စည်သူ - Shwe Eiဂီနဲ့ ထွီ ခုမှတွေ့ဒါ - အာဂ - ကြက်အူလှည့်ကျနော်တို့ ရွာထဲမှာဗျာ - အာဂ - အာဂဘာစားရမှာလဲဟင်…. - တိမ်မည်း - Shwe Eiမျက်လုံးလေး ကလည်ကလည်နဲ့ အရွယ်ရောက်လူ အကုန်သိတယ် ... :P - အာဂ - ရွှေတိုက်စိုးမဲရုံသို့လာ မဲပေးကြပါဦး (ဖတ်/ရွေး၊ ဧပြီ+မေ) -etone - ရွှေတိုက်စိုးမေမေရဲ့ Hand Make Wine - Yin Nyine Nway - ဦး ကျောက်ခဲEast West Dental	PACE	Western Union	Category	Arts & Humanities